Kala shaki soo kala dhax galay Milkiilayaasha Hoteelada Muqdisho iyo shaqaalaha ka shaqeeya (Warbixin) | Puntlandnow.com
Feb 26th, 2015 – by Dr Ligle0
Tan iyo markii maalinimadii jimcaha ee lasoo dhaafay Hotelka Central ee Magaalada Muqdisho uu ka dhacay weerar lagu dilay dad badan ay ku jiraan Masuuliyin katirsanaa Dowlada Soomaaliya, waxaa bilowday kala shaki soo kala dhax galay milkiilayaasha Hoteelada iyo shaqaalaha u shaqeeya.
Weerarkii is qarxinta ahaa ee ka dhacay Hotelka Central ayaa la tuhmayaa in ay ka dambeesay haweeney katimid qurbaha kana mid aheed Shaqaalaha sar sare ee Hotelkaasi, waxa ayna haweeneydaasi galaafatay nolosha dad kor u dhaafaya 30-qof ay ku jiraan Masuuliyiin.
Milkiilayaasha Hoteelada Magaalada Muqdisho iyo raga maamula Hoteelada oo cashir ka bartay weerarka ka dhacay Hotelka Central, ayaa hada bilaabay in ay ka shakiyaan qaar kamid ah Shaqaalaha iyo waardiyaasha Hoteeladooda, waxaana warar aan helnay sheegayaan in qaar kamid ah Hoteelada ay shaqada ka direen shaqaale u shaqeenayay oo ay ka shakiyeen.
Hoteelada Magaalada Muqdisho qaarkood markaad tagto ayaad ku arkeysaa shaqaale cusub oo lagu badalay kuwa laga shakiyay, waxaa sidoo kale ka bilowday Hoteelada qaarkood in la baaro shaqaalaha Hoteelka ka shaqeeya kahor inta uusan gudaha u galin ,iyadona xusid mudan tahay in markii hore aan shaqaalaha la baari jirin.
Dowlada Soomaaliya ayaa awaamiir adag oo si hoose loogu sheegay milkiilayaasha iyo Maamulayasaha Hoteelada Muqdisho kusoo rogtay, waxaana hada Hoteelada qaarkood bilaabeen in ay adkeeyaan amaankooda ayna hubiyaan shaqaalaha u shaqeeya waxa ay yihiin.